What I am and How I became like now is only about one reason. That's because of you Dad, Mom and Aunt. Thanks you all....
The Art of using troops is this
..When ten to the enemy's one, surround him;
.... When five times his strength attack him;
.... If double his strength, divide him;
... If equally matched you may engage him;
.... If weaker numerically. be capable of withdrawing;
.. And if in all respects unequal, be capable of eluding him,
...forasmall force is but booty for one more powerful.:
စပါးကြီးမြွေတစ်ကောင်နှင့် အဆိပ်ရှိတဲ့မြွေတစ်ကောင်တို့ဟာ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။
တစ်ရက်မှာ သူတို့ လိပ်တစ်ကောင်ကို တွေ့တယ်….
ဒါနဲ့ ဒီမြွေနှစ်ကောင်က အရသာရှိလှတဲ့ ညနေစာပဲဆိုပြီး စားဖို့စဉ်းစားတယ်…
သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ကိုယ်လုံးနဲ့ရစ်ပတ်ပြီးသတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။လိပ်ကခေါင်းကိုလျှိုဝင်လိုက်တာနဲ့သူဘယ်လိုလုပ်လုပ် လိပ်ကို လုံးဝမထိခိုက်နိုင်ပါဘူး။
လိပ်ကခေါင်းလေးကို နဲနဲထွက်လာတာနဲ့ တပြိုင်နက် မြွေသေးသေးလေးက သူ့ရဲ့ အဆိပ်ရှိတဲ့ အစွယ်နဲ့ ပေါက်လိုက်တာ လိပ်က လန့်ပြီး ပြန်ဝင်သွားတယ်။ ခဏကြာတော့ လိပ်သေသွားတယ်။
စပါးကြီးမြွေကပြောတယ် “ငါအားတွေတောင်ကုန်သွားတယ်။ လိပ်ကို ဘာမှာမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ မင်းက တစ်ချက်တည်းနဲ့ ပြီးသွားတယ်”။
မြွေလေးက “ငါက သူ့ရဲ့ပျော့ချက်ကို သိတာကိုး”
ဒါပေမဲ့ လိပ်ကအထဲကိုပြနလျှိုဝင်ပြီးမှသေတော့ မြွေနှစ်ကောင်လုံး ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ သူတို့ဟာ လိပ်အခွံကို ချွတ်ဖို့ မတက်နိုင်ဘူးလေ။
ဒီပုံပြင်လေးရဲ့ ဆိုလိုရင်းကတော့ သင်ဘယ်လိုတွယ်ကပ်နေပါစေ။ သူ့ကို သင်ပိုင်ဆိုင်ချင်မှ ပိုင်ဆိုင်မယ်။ သူ့ကို နားလည်မှသာ ပိုင်ဆိုင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ပျော့ချက်ကို နားလည်ပေးနိုင်တယ် ဆိုပေမဲ့ တာဝန်ယူနိုင်မှသာ သူ့ကို သွားနားလည်ပါ။ နားလည်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ အခွင့်အရေးမယူပါနဲ့။ မဟုတ်ရင် အားလုံးဟာ အလကားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ မစားရတဲ့အမဲ သဲနဲ့ပက် ဆိုသလိုပေါ့။
ယောက်ျားများက မိန်းမများအကြောင်း အတန်အသင့်သိထားသည်ဟု ယူဆကြသည်။ အတန်အသင့် သိထားခြင်းသာ ကောင်းပါသည်။ ရာနှုန်းပြည့်သိရန် ကြိုးပမ်းလျှင် ရူးသွပ်ပြီး အသက်တိုနိုင်၏။
မိန်းမများက ယောက်ျားများအကြောင်း တော်တော်ကြီး သိထားသည်ဟု ယူဆကြသည်။ တော်တော်ကြီးသိထားခြင်းသာ ကောင်းပါသည်။ ရာနှုန်းပြည့်သိရန် ကြိုးပမ်းလျှင် ယောက်ျားများ၏ စိတ်ဝင်စားခံရမှု ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါသည်။
ခင်ပွန်းသည်အကြောင်း A to Z သိထားသည်ဟု ဇနီးသည်များက ပြောလေ့ရှိသည်။ ဇနီးအကြောင်း ကကြီးမှ အ အထိ သိထားသည်ဟု ခင်ပွန်းသည်များက ပြောလေ့ရှိကြသည်။ တကယ်တော့ ရာနှုန်းပြည့် မမှန်ပါ။ ထိုသို့သာ သိရိုးမှန်လျှင် ကွာရှင်းမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအကျိုးဆောင်များ ကျိကျိတက် ချမ်းသာနေကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာများက တပည့်အကြောင်း သိသည်ဟု ပြောကြသည်။ ယင်းဆိုချက်မှာ တပည့်များက ဆရာများအကြောင်း သိထားသည်နှင့်ယှဉ်လျှင် ဆင်နှင့်ဆိတ်ကဲ့သို့ အနေအထားသာရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာများက တိတ်တိတ်ကလေးသာ နေသင့်ပါသည်။
အချို့ကငွေကိုယုံသည်၊ အချို့ကလူကိုယုံသည်၊ အချို့ကနှစ်ခုစလုံးကို ယုံသည်၊ အချို့က နှစ်ခုစလုံးကိုမယုံ။ ငွေကိုယုံလျှင် ရူးတတ်သည်။ လူကိုယုံလျှင် နှလုံးရောဂါရနိုင်သည်။ နှစ်ခုစလုံးကိုယုံလျှင် သက်ဆိုးမရှည်တတ်။ နှစ်ခုစလုံးကိုမယုံလျှင် လူဖြစ်ရှုံးတတ်၏။
ဆရာဝန်အကြောင်း လူနာများက ပိုသိသည်။ ရှေ့နေအကြောင်း အမှုသည်များက ပိုနားလည်သည်။ မန်နေဂျာအကြောင်း ဝန်ထမ်းများက ပိုသိသည်။ မိဘအကြောင်း သားသမီးများက ပိုသိပါသည်။ ထိုသို့ပိုသိခြင်း ပိုတတ်ခြင်းတို့ကြောင့် လူနာများ၊ အမှုသည်များ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် သားသမီးများ ပိုပြီးအရစ်ခံရ အဟောက်ခံရ အကြိမ်းခံရ ဖြစ်တတ်၏။ ထို့ကြောင့် မသိချင်ဟန် ဆောင်နေသင့်ပါသည်။
Credit to Ko Nay Myo....
ရေခွက် - “အထီးကျန်လိုက်တာ၊ ရေလိုတယ်၊ ရေထည့်ပေး…”
သခင် - “ကောင်းပြီ၊ ရေရှိရင် အထီးမကျန်တော့ဘူးလား…”
ရေခွက် - “ဟုတ်တယ်ထင်တယ်…”
ဒါနဲ့ သခင်က ရေကိုလောင်းထည့်ပေးလိုက်တယ်…ရေပူဖြစ်နေတယ်၊ ရေခွက်ကသူအရည်ပျော်တော့မလို ခံစားရတယ်၊ ဒါက အချစ်ရဲ့စွမ်းအင်တွေလား လို့စဉ်းစားတယ်။တဖြည်းဖြည်း ရေနွေးလာတယ်…. ရေခွက်လည်း နေလို့ကောင်းလာတယ်…. ဒါလည်းအချစ်ရဲ့ခံစားမှုပဲ ဆိုပြီး စဉ်းစားပြန်တယ်…..
တဖြည်းဖြည်း ရေနွေးလာတယ်…. ရေခွက်လည်း နေလို့ကောင်းလာတယ်…. ဒါလည်းအချစ်ရဲ့ခံစားမှုပဲ ဆိုပြီး စဉ်းစားပြန်တယ်…..
နောက်ဆုံးတော့ ရေအေးသွားတယ်၊ ရေခွက်လေးကြောက်လာတယ်၊ ဘာကိုကြောက်နေမှန်းမသိဘူး။ ဒါက ဆုံးရှူံးမှုရဲ့အရသာလား။
ရေအရမ်းအေးသွားတဲ့အချိန်မှာ ရေခွက်လေးအရမ်းစိတ်ကုန်လာတယ် ဒါက ရေစက်ဆုံးပြီပေါ့….
“သခင်၊ ရေသွန်ပေးပါ၊ မလိုအပ်တော့ဘူး” ဆိုပြီးရေခွက်လေးအော်နေရှာတယ်…
ရေခွက်ဟာ လှုပ်ရင်းခါရင်းနဲ့ နောက်ဆုံး ရေတွေထွက်ကုန်တယ်…ရေခွက်လေးအရမ်းပျော်သွားတယ်… ရုတ်တရက် ရေခွက်ကြမ်းပြင်ပေါ် ပြုတ်ကျသွားတယ်….
ရေခွက်လေးကွဲသွားတယ်…မသေခင်လေးမှာ….ရေလေးရေခွက်ထဲမှာရှိခဲ့စဉ်ကို သူတမ်းတနေတယ်… သူသိသွားတယ်… သူရေကိုချစ်တယ်… သူရေကို ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကို …. ဒါပေမဲ့ …. ရေခွက်ထဲမှာ ရေ လုံးဝပြန်မရှိနိုင်တော့တာကို… တွေးရင်…ရေခွက်လေးငိုကြွေးနေရှာတယ်…. မျက်ရည် နဲ့ ရေ ကရောသွားပြီး နောက်ဆုံးအကြိမ် ချစ်ဖို့ သူကြိုးစားတယ်…..သူတောင်းတတယ်….
သခင်က ကွဲနေတဲ့ အစအနလေးတွေကို ကောက်ယူစဉ်မှာ လက်ကိုရှမိတယ်….
Monkey see monkey do... :)
တစ်ခါတုန်းက အလွန်ကြီးမားတဲ့ ပန်းသီးပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်...ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အဲဒီသစ်ပင်ကြီးဆီကိုလာပြီးဆော့ကစားလေ့ရှိတယ်..သစ်ပင်ကြီးက အဲဒီကောင်လေးကိုအလွန်ချစ်ရှာတယ်...ကောင်လေးကလည်းသစ်ပင်ကြီးကိုချစ်တယ်....ကောင်လေးဟာနေ့စဉ်သစ်ပင်ကြီးထိပ်ဖျားထိရောက်အောင်တက်တယ်...အသီးတွေကိုစားတယ်..သစ်ပင်ကြီးရဲ့အရိပ်အောက်မှာတစ်ရေးတစ်မောမှေးတယ်...ကောင်လေးဟာသစ်ပင်ကြီးကိုချစ်တယ်...သစ်ပင်ကြီးကလည်းအလွန်ပျော်ရှာတယ်...ဒီလိုနဲ့အချိန်တွေဟာ တရွေ့ရွေ့နဲ့ကုန်ဆုံးလာခဲ့တယ်....တစ်နေ့မှာ ကောင်လေးဟာသစ်ပင်ကြီးဆီကိုလာခဲ့တယ်..
သစ်ပင်ကြီး - "ကောင်လေးရေ..လာပါ..ငါနဲ့လာဆော့ပါအုံး"
ကောင်လေး - " ကျွန်တော်အရင်လိုကလေးလေးမဟုတ်တော့ပါဘူး..ဒီသစ်ပင်ကြီးနားမှာလည်းထပ်ပြီးမဆော့ချင်တော့ဘူး..ကျွန်တော်အရုပ်တွေလိုချင်တယ်..အဲဒါတေ
သစ်ပင်ကြီး - "၀မ်းနည်းပါတယ်ကောင်လေးရယ်..ငါ့မှာမင်းကိုပေးဖို့ပိုက်ဆံမရှိဘူး...ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့အသီးတွေအားလုံးကိုမင်းခူးသွားပါ..ပြီးရင်ရောင်းပါ..အဲဒါဆိုမင်းလိုအပ်နေတဲ့ပိုက်ဆံတွေရပါလိမ့်မယ်"ကောင်လေးဟာအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့သစ်ပင်ပေါ်ကပန်းသီးတွေအားလုံးကိုသိမ်းကျုံးယူပြီးပျော်ရွှင်စွာနဲ့ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်...ပန်းသီးတွေကိုခူးဆွတ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာကောင်လေးဟာသစ်ပင်ကြီးဆီကိုဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူး...သစ်ပင်ကြီးဟာအလွန်ဝမ်းနည်းနေခဲ့တယ်....သက္ကရာဇ်ပေါင်းများစွာကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတဲ့ တစ်နေ့မှာအရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ကောင်လေးဟာ သစ်ပင်ကြီးဆီကို ပြန်လာခဲ့တယ်..သစ်ပင်ကြီးကစိတ်လှုပ်ရှား စွာနဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ကောင်လေးကိုကြည့်နေတယ်...
သစ်ပင်ကြီး - " လာပါ..ငါနဲ့လာဆော့ပါ"
ကောင်လေးဟာ သစ်ပင်ကြီးရဲ့အကိုင်းအခက်တွေအားလုံးကိုခုတ်ယူပြီးပျော်ရွှင်စွာနဲ့ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်...အချိန်တွေကြာလာတဲ့အခါ ကောင်လေးဟာသစ်ပင်ကြီးဆီ ထပ်ရောက်လာပြန်ပါတယ်...
သစ်ပင်ကြီး - "ငါ့ရဲ့ပင်စည်ကိုအသုံးပြုပြီးမင်းအတွက်လှေတစ်စင်းဆောက်ပါ...ဒါဆိုရင်
နှစ်များစွာကြာပြီးတဲ့ နောက်ဆုံးမှာတော့ အိုမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အဘိုးအိုတစ်ယောက်ဟာသစ်ပင်ကြီးဆီကိုရောက်လာခဲ့တယ်...သစ်ပင်ကြီး - "၀မ်းနည်းပါတယ် ကောင်လေးရယ်... ငါ့မှာမင်းကိုဒီ့ထက်ပိုပြီးပေးစရာဘာမှမရှိတော့ဘူး... မင်းအတွက်ပန်းသီးတွေလည်းမရှိတော့ပါဘူး"
အဘိုးအို - "ကိစ္စမရှိပါဘူး...အဲဒါတွေကိုကိုက်ဖို့အတွက်ငါ့မှာသွားတွေမရှိတော့ဘူး"
သစ်ပင်ကြီး - "မင်းတက်ဖို့အတွက်ပင်စည်လည်းငါ့မှာမရှိတော့ပါဘူး"
အဘိုးအို - "အဲလိုတက်ဖို့အတွက်လည်း ငါအရမ်းအိုမင်းနေပါပြီ"
သစ်ပင်ကြီး - "ငါ့မှာမင်းကိုပေးဖို့အတွက်တကယ့်ကိုဘာမှမရှိတော့ပါဘူးကွယ်..ငါ့မှာခြောက်သွေ့နေတဲ့အမြစ်ကြီးတစ်ခုပဲကျန်ပါတော့တယ်"
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေရှာတဲ့အဘိုးအိုဟာ ခြောက်သွေ့နေပြီဖြစ်တဲ့အမြစ်ကြီးပေါ်မှာထိုင်လိုက်ပါတယ်...သစ်ပင်ကြီးကတော့ဝမ်းသာမှုတွေနဲ့မျက်ရည်တွေကြားကနေအတောက်ပဆုံးပြုံးနေပါတော့တယ်....***သင်ဘယ်လောက်ပဲအလုပ်တွေများနေပါစေ သင့်ရဲ့အချို့သောအချိန်လေးတွေကိုတော့မိဘနဲ့အတူကုန်ဆုံးနိုင်ပါစေ***
From one forward mail...
Awesome Cartoon .. Enjoy it..
When you're prepared, you're more confident, when you haveastrategy, you're more comfortable.
Nice Video.. should watch..
"ရှေးကံကြောင့် မိုင်ပေါင်းထောင်ချီ ဝေးနေကြသူတွေ တွေ့ဆုံရင်းနှီးခွင့် ရကြတယ်။ ကံမပါရင် ပုခုံးချင်း ရှပ်တိုက်သွားတာတောင် ရင်းနှီးခွင့် မရဘူး"
I thank God you’re in for the duration
You’ve endured with patience
Even though we’ve been together
Through lives sorrow and pain
Somehow we’ve always managed
And we’ve always endured the strain
A critic isaman who know the way but can't drive the car.
တဖြစ်တောက်တောက် ပြောနေစဉ် အိမ်ရှေ့မှ ကလေးတစ်ယောက် အော်သွားသံ ကို ကြားလိုက်ရသည်။ "ဘွားလေးရေ အဘိုး သစ်ပင်တက်နေတယ်ဗျို့"
"ရှင်.. ရှင်.. သစ်ပင်ပေါ် တက်တယ်ဆို"
အဘိုးကြီးသည် နောက်ပစ်ထားသော လက်ကို ရှေ့သို့ ထုတ်လိုက်သည်။ ကံ့ကော်ပန်းကလေး သုံးလေးခက် ဖြစ်လေသည်။
တစ်နေ့တစ်လံ ပုဂံဘယ်ဝေးတဲ့။ ဒါပေမယ့် ပုဂံကိုရောက်တဲ့လမ်းကအများကြီးပါ။ လမ်းမှန်ကိုမမေးမစမ်းပဲနဲ့လျှောက်မယ်ဆိုရင် တစ်နေ့တစ်လံမပြောနှင့် တစ်နေ့ဆယ်မိုင်သွားရင်တောင် ပုဂံမပြောနဲ့ ပြည်တောင်မရောက်နိုင်ပဲ တစ်နေ့တစ်လံ ပုဂံဟာအဝေးကြီးပါ ဖြစ်နေမှာပါ။
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက အင်မတန်မှ စိတ်တိုစိတ်ဆတ်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် ရှိသတဲ့။ တစ်နေ့ကျတော့ သူ့အဖေက ကောင်လေးကို အိမ်ရိုက်သံတစ်ထုပ်ပေးလိုက်ပြီး ပြောပါတော့တယ်။ မင်း တစ်ခါစိတ်တိုတိုင်း သံတစ်ချောင်းကို နောက်ဖေးက ၀င်းထရံတိုင်မှာ သွားရိုက်ချေကွာတဲ့။အဖေက အဲ့ဒီလိုပြောပြီး သံထုပ်ကိုပေးလိုက်တဲ့ ပထမနေ့မှာ ကောင်လေးဟာ ၀င်းထရံတိုင်မှာ သံပေါင်း ၃၇ချောင်းရိုက်သွင်းဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ သူစိတ်တိုတိုင်း သံလေးတွေကို ၀င်းထရံမှာ ရိုက်ရင်းရိုက်ရင်း ကောင်လေးဟာ သူစိတ်သူထိန်းနိူင်လာသတဲ့။ သံရိုက်ချက်တွေဟာလည်း တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ကျဲလာခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ကောင်လေးဟာ ၀င်းထရံမှာ သံပြေးရိုက်တာထက်စာရင် ဒေါသဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကို ထိန်းရတာပိုလွယ်လာမှန်း သဘောပေါက်လာတော့တယ်။
အဆုံးမှာ ကောင်လေးဟာ စိတ်မတိုပဲနေနိူင်တဲ့နေကို ရောက်လာရော။ ကောင်လေးကပြေးပြီး သူအဖေကို သတင်းသွားပို့တယ်.. အဖေရေ.. သားတော့ စိတ်ကိုထိန်းနိူင်သွားပြီဗျ..
အဲ့ဒီလိုကျတော့ သူအဖေက တစ်မျိုးခိုင်းပြန်ရော..မင်းကိုယ်မင်း ဒေါသမဖြစ်အောင် တစ်နေကုန်ထိန်းနိူင်ပြီဆိုတာနဲ့ အဲ့ဒီသံတွေကို ပြန်နှုတ်ဦးကွာ။ တစ်နေ့ ထိန်း နိူင်ရင် ညအိပ်ခါနီး တစ်ချောင်းနှုန်းနဲ့ နှုတ်နော်လို့ မှာလိုက်သတဲ့။ ရက်တွေကြာလာတော့ ကောင်လေးက သူအဖေကို ပြောနိူင်သွားတယ်။ အဖေရေ.. သားရိုက်ခဲ့တဲ့ သံတွေအားလုံးကို နှုတ်ပြီး သွားပြီ တစ်ချောင်းမှ မကျန်တော့ဘူး။
သည်အခါအဖေလုပ်တဲ့သူက သားရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီး သားရိုက်ခဲ့တဲ့ဝင်းထရံဆီကို ခေါ်သွားတယ်။ တော်တယ်ငါ့သား လို့လည်းဆိုတယ်။ ဒါပေမယ့် သား သေချာကြည့်စမ်း။ ၀င်းထရံတိုင်မှာ အပေါက်တွေဖြစ်ကျန်ခဲ့တယ်နော်။ ဒီဝင်းထရံတိုင်တွေက အရင်တုန်းကလို ချောချောမွေ့မွေ့မဟုတ်တော့ဘူး ဆိုတာ သားမြင်တယ် မဟုတ်လား။ အေး..သားကစိတ်တိုတိုနဲ့ ပါးစပ်ကပြောချလိုက်တဲ့အခါ တစ်ဖက်သားဆိုတဲ့ဝင်းထရံတိုင်မှာ အခုလိုအမာရွတ်တွေထင်ကျန်ရစ်ခဲ့တတ်တယ် သားရယ်။အဲ့ဒီလိုပဲလူတစ်ယောက်ကို သားကဓါးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်။ ပြီးရင်ဓါးပြန်နှုတ်ပြီး ရှိခိုးတောင်းပန်တယ်ဆိုပါစို့။ သားဘယ်နှစ်ခါပဲရှိခိုးတောင်းပန်ပါစေ။ ဒဏ်ရာနဲ့ အမာရွတ်ကတော့ မလွဲမသွေကျန်ခဲ့မှာပဲ ငါ့သားရယ်..တဲ့။တကယ်တော့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေဆိုတာ အဖိုးတန်တဲ့ရတနာတွေပါပဲ။ သူတို့ဟာ ငါတို့တွေကို ပျော်ရွှင်ရယ်မောစေတယ်။ အားပေးကူညီတယ်။ ဒုက္ခ၊သုခတွေကိုလည်း မျှဝေခံစားကြတယ်။ ရင်ဖွင့်သမျှကို ဂရုစိုက်နားထောင်ပေးတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ခုခုဆိုစိတ်လိုက်မာန်ပါမလုပ်နဲ့။ သူတို့ကိုသံနှုတ်ရာကျန်ခဲ့တဲ့ ၀င်းထရံတွေအဖြစ်မရောက်ပါစေနဲ့။ကိုယ့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကို ကိုယ်က ဘယ်လောက်ဂရုစိုက်ကြောင်း သူတို့ကိုလည်း သူတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေအပေါ် ဂရုစိုက်လာအောင်လုပ်ပေးသင့်ကြောင်းပြောကြားပေးပါ။ ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်က သူငယ်ချင်းကောင်း မိတ်ဆွေကောင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေဆီကို ဒီပုံပြင်လေးကို လက်ဆင့်ကမ်းပါ။ ယုတ်စွဆုံး ဒီစာလေးကို ပို့လိုက်တဲ့သူဆီ ဒီအတိုင်းပြန်ပို့နိူင်ပါသေးတယ်။ ကိုယ်ပို့လိုက်တဲ့စာ ကိုယ့်ဆီ ပြန်ရောက်လာရင် ကိုယ့်မှာ မိတ်ဆွေကောင်းတွေရှိနေတာကို အလိုလိုခံစားနိုင်မှာပါ။
ဒီစာအုပ်နာမည်က နေပျော်တဲ့ဘ၀ ကြည်မြတဲ့ဘ၀င် ရွှင်လန်းတဲ့စိတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ရေးတဲ့သူက ဆရာအတ္တကျော်ပါ။အားလုံးပျော်ရွှင်စေဖို့ဆန္ဒပြုလျက်.....
"ကိုမြ။ ရှင်လို ပညာအရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့သူ၊ ရုပ်ချောတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်မကိုလက်ထပ်လိုက်တာလဲဟင်"
► 20 April - 27 April (19)
► 23 March - 30 March (29)
Word of the Wises